Xulalka Brazil iyo Argentina oo markii ugu horreysay caawa isaga hor imaan doona kulan aysan ku lug lahayn Kooxda Barcelona – Gool FM
Taageerayaasha Man City oo madaxa ka feeray Goolhayaha Aston Villa & Kooxda Sky Blue oo raali-gelin ka bixisay dhacdadaas
Abaal-marinnadii la bixiyey maalintii ugu dambeysay horyaalka Premier League 2021/22.. (Salah, Son, Ederson & Alisson oo abaal-marinno helay)
Ka bogo Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulammadii xalay lagu soo xiray horyaalka Premier League
CHAMPIONS: AC Milan oo loo caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaalka Serie A
HAMBALYO: Man Cty oo hanatay markii labaad xiriir ah horyaaalka Premier League & guud ahaan natiijooyinka kulammaadii la ciyaaray
Xulalka Brazil iyo Argentina oo markii ugu horreysay caawa isaga hor imaan doona kulan aysan ku lug lahayn Kooxda Barcelona
Haaruun September 5, 2021
(Sao Paulo) 05 Sebt 2021. Xulalka Brazil iyo Argentina ayaa caawa isaga hor imaan doona markii ugu horreysay kulan aysan ku lug yeelan doonin Kooxda kubadda cagta Barcelona.
Kulankan oo ka dhacaya Magaalada Sao Paulo, kaasoo ay isku qaban doonaan xulalka Brazil iyo Argentina ayuusan ku jirin doonin labada dhinacba shaqsi ka tirsan Kooxda Barcelona.
Kulankan oo qeyb ka ah isreeb-reebka Koobka Adduunka ayaa waxaa si gaar ah indhaha loogu hayn doonaa Lionel Messi iyo Neymar Jr oo iska hor imaanaya, kuwaasoo haatan ka wada tirsan PSG inkastoo ay ka soo wada ciyaareen Barcelona.
Wadar ahaan labada xulba kuma jiri doono hal cyiaaryahan oo looga yeeray Kooxda Barcelona oo ka soo muuqan doona garoonka, safka hore, xiddigaha keydka iyo weliba shaqaalaha kale ee labada dhinac.
Waxaa xusan mudan in Kooxda Barcelona ay taariikh weyn ku lahayd qaaradda Koonfurta Ameerika, waxaana u soo ciyaaray xiddigo waa weyn sida, Diego Maradona, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Juan Roman Riquelme, Ronaldinho, illaa Neymar iyo Lionel Messi.
Xiddigaha inta ugu badan ka soo muuqdan labadaan xul ee Kooxda Barcelona xirnaa waxaa ay kala yihiin Lionel Messi iyo Neymar, laakiin tan iyo sanadkii 2005 waxaa si joogto ah uga soo muuqanayey Messi oo dalkiisa iyo Barca labadaba xubin muhiim ah u ahaa.
Yeelkeede, Neymar iyo Messi waxa ay ku midoobeen Kooxda PSG, waxaana markaan iyagoo aan wakiil ka ahayn kooxda Barcelona ay caawa ka soo muuqan doonaan kulanka u dhexeeya xulalka Brazil iyo Argentina.
Isreeb-reebka ay Waddamada Latin America ugu jiraan Koobka Adduunka, waxaa hoggaanka u haya xulka Brazil oo todobo kulan oo ay dheeshay ka heshay 21-dhibcood, halka xulka Argentina oo haysta 15 dhibcood uu ku jiro kaalinta labaad.
Kooxda Real Madrid oo Fede Valverde ka hor istaagtay inuu u dhaqaaqo Horyaalka Premier League… (Maxay sameysay Madrid?)
Cristiano Ronaldo oo Guri qiimo sare oo qasri ah ka dagay Magaalada Manchester… (Miyey Man Utd kiradiisa bixin doontaa?) + SAWIRRO